Pasta gratin miaraka amin'ny ovy sy crème legioma | ThermoRecipes
Pasta sy graty ovy
paty60 minitraOlona 6340 kaloria
Manolotra anao lalana voalohany izahay mandritra ny fararano na ririnina. Dia a paty mamy, miaraka amin'ny ovy sy legioma izay tsy hita, masaka ao amin'ny Thermomix ary avy eo manendy.
Azo aseho amin'ny endritsoratra lehibe io, araka ny ho hitanao amin'ny horonantsary, na amin'ny kaontenera kely kely kokoa. Ny zava-dehibe dia izay azo antoka ny kaontenera satria izany no ho dingana farany, ny fanaova.
Como fromazy ampiasao ireo tianao indrindra. Ao an-tranoko misy ny mpankafy an'i Parmesan ary ny sasany tsy mahita akory, noho izany dia napetrany tao anatin'ny antsasaky ny lovia io fromazy io. Ny zava-dehibe, lalina, dia ny fahafalian'ireo misakafo.
1 Pasta sy graty ovy
Pasta miaraka amin'ny crème ovy sy legioma mety amin'ny andro mangatsiaka.
Fotoana fiomanana: 10M
Fotoana hiketrehana: 50M
Fotoana manontolo: 1H
Karaoty 80 g, voahitsakitsaka ary apetraka
Seleria 50 g, tapaho
Tongolo 40 grama
600 g ny ron-kena legioma
Voatabia 1, voahitsakitsaka ary apetraka
400 g ovy voahitsakitsaka ary apetraka
Fromazy Parmesan grated
Fromazy hafa, voahidy
Ravina persily vaovao vitsivitsy (tsy voatery)
Napetrakay tao anaty vera ny karaoty, seleria ary tongolo. Izahay dia manao fandaharana 8 minitra, hafainganam-pandeha 5.
Ampiarahinay ny menaka ary, tsy mametraka ilay bikam-baravarana izahay, dia manao programa 3 minitra, 120º, hafainganana 1.
Ampio ny voatabia sy ny ron-kena. Izahay dia manao fandaharana 30 segondra, hafainganam-pandeha 8, mitazona ilay bikabeta.
Izahay izao dia manampy ny ovy. Izahay dia manao fandaharana 10 minitra, 100º, fihodinana havia, hafainganana 1.
Manampy ny paty sy sira kely izahay izao. Izahay fandaharana ny fotoana voalaza amin'ny fonosana pasta, 100º, mihodina miankavia, hafainganam-pandeha 1.
Rehefa vita ny paty dia ataontsika ao anaty lovia na ao anaty kaontenera maromaro, mety amin'ny lafaoro.
Manarona ny fromazy izahay.
Manendasa 200º mandritra ny 15 minitra eo ho eo, mandra-pahitantsika fa miempo ny fromazy.
Esorinay amin'ny lafaoro. Miandry 10 minitra eo ho eo izahay ary manompo, raha tiantsika, miaraka amin'ny persily voatetika kely.
Fanazavana fanampiny - Asparagus maintso miaraka amin'i Parmesan
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » General » Pasta sy graty ovy
Buttercream ho an'ny mofomamy rose